I-Semalt ichaza ukuthi kungani ukusebenzisa Isevisi yokuBhala i-Article kukhulisa ukuthengisa
Amaklayenti ethu aqinisekisile ukuthi izinzuzo zokusebenzisa i-athikili ukumaketha ibhizinisi lakhonoma iwebhusayithi ye-e-commerce idlula kakhulu izindleko zayo. Uma isihloko sakho sishicilelwe, kubaukulungiswa okuhlala njalo ku-intanethi okuhlala ikubuyisela kuwe. Ichazwe ngokunembileokuqukethwe kunempahla ebalulekile ekunika izinzuzo ezibalulekile zokuncintisana - kelley blue book boat value used boat.
Uma ufuna ukuthuthukisa izinga lezinjini zokusesha lakho, ibhizinisi,noma iwebhusayithi ye-e-commerce, insizakalo yokubhala incwadi ingaba nenzuzo kakhulu kuwe. Ukusebenzisalolu hlobo lwenkonzo, uzoqeda umsebenzi onzima wokucwaninga, ukuhlela, ukubhala,futhi ukufundwa kobufakazi kuyadingeka ulwazi ukuze uqedele okuqukethwe kombhaloI-high quality
- Ivan Konovalov, iMenenja yokuPhumelela kweKlayenti ehola phambili Semalt Amasevisi weDividenti, ahlanganyela ukuqonda ukuthi yiziphi izinzuzo zokubhala i-inthanethi ezinikezwa ibhizinisi lakho.
Uma usebenzisa isevisi yobuchwepheshe, uzoba nomsebenzi ophezulu owenzelwe ikhwalithi.Lokhu kuthuthukisa kakhulu umkhiqizo wakho futhi kunikeza amakhasimende angase abe nomqondo omuhle kakhuluwesayithi lakho. Abalobi bezobuchwepheshe bazi ukuthi bangabhala kanjani ngokucacile, okufingqiwe ngolimi amakhosimende akho azowaqonda kahle.
Izinsiza zokubhala izihloko ziqinisekisa umsebenzi wokuqala. Umsebenzi wangempela ubaluleke kakhulukuze kufinyelele ku-rank engine rankings kukhathazekile ngoba izinjini zokusesha zizokwenza ucingo umabaqume ukuthi ukopishe futhi uhambisa elinye isihloko noma izingxenye zalesi sihloko ngenzuzo yakho siqu..
Izihloko ezibhalwe kahle ezisebenzayo zingasetshenziswa ukuhlinzekela okuqukethwe okufanelekayoamakhasi akho ewebhu. Umthengi uthola umbono wakhe wokuqala (mhlawumbe kuphela) kusuka kokuqukethwekusayithi lakho. Ukuqonda lokhu, uzobe ubeka phambili unyawo lwakho phambili ngokulandelanaukuthengisa ikhasimende ngokuchofoza isixhumanisi esizoholela kuye ekhasini lakho lenqola yezitolo.
Abalobi abaqeqeshiwe baqeqeshelwe ukwenza ngcono iwebhusayithi yakho, eqinisekisa ukuthi ingconoizinjini ze-search engine. Ukusebenzisa injini yokusesha kuyinto engenzekawena ufunde, kodwa isikhathi sakho sibaluleke kakhulu, futhi mhlawumbe ufuna ukugxilaamandla ekulondolozeni ibhizinisi lesayithi lakho elikulo.
Uzokwazi ukuthenga i-athikili cishe yonke into ekhonanoma niche yebhizinisi. Ungasebenzisa izihloko ezibhaliwe ukuze uhlinzeke amakhasimendengubani ovakashela ulwazi lwakho lwesazi sesayithi, noma ungabathumela kumaforamu aqeqeshiwe,izincwadi, izihloko zamasayithi, izingosi zokuxhumana nabantu, kanye namabhulogi. Lokhu kuzokusiza ukubaukwakha ukwethembeka kwakho njengengcweti ensimini yakho noma niche.
Abalobi bezobuchwepheshe bazokwazi ukubhala ngezitayela eziningi ezahlukeneukuze uqondane kangcono nezilaleli zakho ezibhekiswe kuzo. Khumbula ukuthi isihloko sakho sizobaukuxhumana ngqo nekhasimende lakho elihlosiwe ngolimi ayelikhuluma ngalouzoqonda. Uma ungeke ukwazi ukuthola umlayezo ocacile, oqondileikhasimende lakho elibhekiswe kulo, ngeke uphumelele ibhizinisi lakhe.
Ungasebenzisa futhi abalobi be-athikili bezobuchwepheshe ukuze bahlaziye indaba yakhoukukhuluma nezilaleli ezincane kakhulu phakathi kwezilaleli zakho ezibhekiswe kuzo. Lena yindlelaokuyinto ethatha isihloko sokubhala professional uzokwazi ukusebenzisa ngokugcwele amandla.
Khumbula ukuthi ukhuphisana nezigidi zabanye abanikazi bewebhu kuwebhu.Kufanele usebenzise wonke amathuba okuthola ithuba lokuthola ibhizinisi. Ngokwesilinganisoikhasimende lizobuka amawebusayithi amaningana uma efuna ukuthenga. Iisipiliyoni Semalt ochwepheshe sibonisa, ukuthi amawebhusayithi anokuqukethwe okuvelele athola njaloimpi, ukuthatha ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo.